सही व्हिस्की गिलास कसरी छनौट गर्ने-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
सही व्हिस्की गिलास कसरी छनौट गर्ने
व्हिस्की गिलासहरू पिउने र व्हिस्कीको नाकको अनुभव बढाउनको लागि आकार दिइन्छ। सबैभन्दा लोकप्रिय चश्मामा बल्बस शरीरको आकार हुन्छ जसले सुगन्धलाई सङ्कलन गर्न र साँघुरो रिमबाट निर्देशित गर्न अनुमति दिन्छ।
सही व्हिस्की गिलास छनोट गर्नाले पिउनेको रमाइलो सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ र प्रत्येक व्हिस्की फ्यानको लागि गिलासको आकार र शैली छ। यी कम्प्याक्ट ग्लेनकेर्नदेखि असाधारण स्निफ्टरसम्मका छन्। हाम्रो गाईडले तपाईका लागि सही फेला पार्न मद्दत गर्नुपर्छ। त्यस कुराको लागि, तिनीहरूले उत्कृष्ट उपहार दिन्छन्- किन तपाईंको जीवनमा व्हिस्की पिउने व्यक्तिको लागि उपहारको रूपमा व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त नगर्नुहोस्? यहाँ सबैभन्दा सामान्य व्हिस्की चश्मा छन्:
1। टीhe ट्युलिप आकारको गिलास (उर्फ कोपिटा शैलीको गिलास, डक गिलास)
यो गिलास copita मा आधारित छ - परम्परागत स्पेनिश गिलास नमूना शेरी को लागी प्रयोग गरिन्छ। यो विश्वभरका मास्टर डिस्टिलर, ब्लेंडर र साँचो व्हिस्की पारखीहरूको छनौट भएको छ। यसलाई एक पटक 'डक' गिलास नाम दिइएको थियो किनभने व्यापारीहरूले यसलाई डकसाइडमा मदिरा र आत्माहरू नाक गर्न प्रयोग गरे। यो लामो काण्डले पिउने हात (र यसको प्रदूषक गन्ध) लाई नाकको धेरै नजिक आउनबाट रोक्छ, जबकि यसको कचौराको आकारले अलि साँघुरो रिमको माध्यमबाट सुगन्ध केन्द्रित गर्दछ। गिलास सजिलैसँग झुण्ड्याउन सकिन्छ त्यसैले आत्मालाई न्यानो पार्न सकिन्छ यदि चाहियो भने। समग्रमा, यो एक गिलास हो जुन एकल माल्ट व्हिस्कीको सूक्ष्मताको साँचो प्रशंसाको लागि उपयुक्त छ।
2. Glencairn व्हिस्की गिलास
ट्यूलिप आकारको गिलासको आकारमा समान, ग्लेनकेर्नलाई अझ बलियो पोत मानिन्छ, यद्यपि यो प्रशंसाको लागि समान रूपमा उपयुक्त छ। यसको छोटो, ठोस आधारले स्टेमलाई मन नपर्नेहरू बीच लोकप्रिय स्थिर गिलास बनाउँछ। गिलास पनि केहि हद सम्म मोटो छ र यसको मतलब यो convivial पेय को लागी अधिक पर्याप्त छ। यसको आकारको कारण, Glencairn व्हिस्की कसरी घुमाउने भनेर सिक्नको लागि उत्तम गिलास हो, सामान्यतया पूर्ण प्रशंसाको लागि व्हिस्कीको सुगन्ध खोल्न प्रयोग गरिने अभ्यास। फेरि, कचौरा आकारको च्यानलले साँघुरो रिमतिर सुगन्ध दिन्छ। यो ट्युलिप आकारको गिलासको आधुनिक, कम 'देखाउने' सापेक्ष हो, र एक मात्र व्हिस्कीमा समर्पित छ।
3. व्हिस्की टम्बलर (उर्फ द रक्स गिलास, पुरानो जमानाको गिलास, लोबल)
सबै व्हिस्की चश्मा को सबै भन्दा साधारण। यसको फराकिलो रिमको कारण, टम्बलर नाकको लागि उपयुक्त छैन, तर यो हुनु आवश्यक छैन - यो बरफ भर्न र तपाईंको छनौटको व्हिस्की, वा धेरै क्लासिक ककटेलहरू सेवा गर्नको लागि हो। यसको फराकिलो र बलियो आधारले यसलाई 'मडलिंग' ककटेल सामग्रीहरूको लागि आदर्श बनाउँछ, जबकि यसको सादा डिजाइनले साधारण पेयहरूलाई आफैं बोल्न दिन्छ। एक कालातीत गिलास, र आत्माको आनन्दको सम्पूर्ण स्पेक्ट्रमको लागि खुला कुनै पनि व्हिस्की फ्यानको लागि हुनुपर्छ।
टम्बलरको अग्लो भाइ र गिलास संसारको सबैभन्दा सम्मानित तर साधारण व्हिस्की ककटेलहरू मध्ये एकसँग सम्बन्धित छ: स्कच र सोडा। यसले लामो र आरामदायी पेयको लागि धेरै बरफ, आत्मा र मिक्सरको लागि अनुमति दिन्छ। आज हाईबल अन्य साधारण व्हिस्की सेवाहरू जस्तै व्हिस्की र जिंजर एले वा व्हिस्की र लेमोनेडका प्रशंसकहरू बीच समान रूपमा लोकप्रिय छ। यो जापानमा विशेष गरी मनपराइएको छ। हाईबलसँग आकारले खासै फरक पार्दैन, तर यसले डिम्पल पिन्ट गिलासमा स्कच र सोडाको सेवा गर्न सक्दैन।
5. स्निफ्टर (उर्फ बेलुन, ब्रान्डी कचौरा, कोग्नाक गिलास)
सज्जनहरूको क्लबमा दृढतापूर्वक जरा गाडिएको गिलास, यसले क्लास ओज गर्छ - रातको खाना पछि धुम्रपान गर्ने कोठामा व्हिस्की र सिगारहरू सोच्नुहोस्। सामान्यतया ब्रान्डीको लागि प्रयोग गरिन्छ, यो अब सामान्यतया अँध्यारो, वृद्ध आत्माहरूको खपतको लागि एक गिलास हो। तिनीहरू प्रायः डिजाइन गरिएका हुन्छन् ताकि, आंशिक रूपमा तेर्सो राख्दा, आत्मा बाहिर नफर्कियोस्। तर यी सबै भव्य संघसंस्थाहरूले उच्च पिउने भाँडोको लागि आवश्यक पर्दैन - स्निफ्टरको असाधारण रूपमा फराकिलो शरीर र कडा रिमले कठोर इथेनॉल वाष्पहरू निस्कन प्रोत्साहित गर्न सक्छ, अन्य सुगन्धहरूलाई शक्ति दिन्छ।
6. NEAT व्हिस्की गिलास
ब्लकमा एक नयाँ बच्चा, र प्राविधिक दिमागका लागि एउटा, NEAT गिलास गिलास उडाउने कारखानामा भएको गल्तीको विडम्बनापूर्ण परिणाम हो। विचित्र आकारको भाँडाको पछिको परीक्षणले पत्ता लगायो कि यो नाकबाट कठोर अल्कोहल वाष्पहरू निर्देशित गर्न पूर्ण रूपमा आकारको थियो। NEAT गिलास, प्राकृतिक ईन्जिनियर गरिएको अरोमा टेक्नोलोजीको लागि उभिएको, इथानोलको हल्का अणुहरूलाई यसको खोलबाट बाहिर निस्कन्छ, व्हिस्की भित्र भारी, अधिक मोहक अणुहरू पछाडि छोड्छ। यो एक गिलास प्रशंसाको लागि राम्रोसँग उपयुक्त छ, तर कठोर सुगन्धहरूलाई अस्वीकार गर्ने क्षमताको लागि सामान्य रूपमा आत्मा वर्गमा नयाँ मानिसहरूका लागि पनि उपयुक्त छ। यसको असामान्य आकारको कारण यसबाट पिउने बानी पर्न अलिकति लाग्न सक्छ।
अघिल्लो: विश्व प्रसिद्ध क्षेत्रहरूबाट ती व्हिस्कीहरूको स्वाद कस्तो छ?
अर्को: व्हिस्की को प्रकार